Kutheni iidosi ezimbini zokugonya i-covid-19 ye-pfizer kunye ne-moderna?
iFG Trade /
I-COVID- 19 isifo esisibangelwa yintsholongwane entsha, SARS-CoV-2. Ngelixa abantu abaninzi abane-COVID-19 babe neempawu ezincinanana , abanye banokugula kakhulu. Amayeza okugonya aliqela aphuhlisiwe ukukhusela ngokuchasene ne-COVID-19. Ezimbini zazo zizitofu zokugonya zePfizer-BioNTech kunye neModerna. I-Bot h yezi zitofu ifuna iidosi ezimbini.
Ugonyo lukaJohnson & Johnson luye lwasetyenziselwa ukusetyenziswa okungxamisekileyo. Nangona kunjalo, eli chiza lifuna idosi enye kuphela.
Kutheni le nto ezinye izitofu zifuna idosi ezimbini? Ufanele ulinde ixesha elingakanani phakathi kweedosi? Ngaba ukhuselekile emva kwedosi yokuqala?
Eli nqaku liza kuchaza ukuba kutheni unayoUdinga imithamo emibini ye Pfizer-BioNTech kunye neModerna yezitofu zokugonya, kwaye uyakunika iimpendulo kweminye imibuzo emininzi.
Zisebenza njani ezi zitofu?
Pfizer-BioNTech kunye neModerna zokugonya zonke zisebenzisa ezimbini Itekhnoloji ye-mRNA . Iiseli zomzimba wakho ngokwemvelo zisebenzisa i-mRNA ngalo lonke ixesha ukwenza iintlobo ezininzi zeeproteni ozifunayo ukuze uhlale usempilweni.
I-mRNA evela kumachiza amabini e-COVID-19 agonyo anika iiseli emzimbeni wakho nemiyalelo yokwenza iprotheni ye-spike ekhethekileyo kwi-coronavirus yenoveli. Le proteni ye-spike ifumaneka ngaphezulu kwintsholongwane. Isebenzisa le protein ye-spike ukuzincamathelisa kuyo kunye nokufaka iseli yokubamba emzimbeni wakho.
Xa ufumana isitofu sakho se-COVID-19, amajoni akho omzimba enza ulwazi malunga neprotein ye-spike kwaye ivelise impendulo yomzimba kuyo. Oku kuqukaukuveliswa kwee-antibodies. Emva kogonyo lwakho, amajoni akho omzimba ayaqhubeka nokugcina ulwazi malunga neproteyini yespike. Oku kunokukuthintela ekubeni
. Yonke inkqubo yokuzikhusela ihlala ithatha malunga neeveki ezi-2 emva kwethamo lesibini lokugonya. Kungenxa yoko le nto usenakho ukufumana i-coronavirus entsha kwaye ugule ukuba uthe wabhencwa kuyo kwakamsinya emva kokuyifumana. isitofu sakho sokugonya ifumanise ukuba iyeza lokugonya le-Pfizer-BioNTech kunye neModerna libangele
buthathaka impendulo yomzimba
xa unikwe idosi enye. Nangona kunjalo, kwabakho impendulo eyomeleleyo yomzimba xa kongezwa idosi yesibini.
Ngokusisiseko, idosi yokuqala yokugonya iqala inkqubo yokuphucula ukhuseleko. Idosi yesibini isebenza ukukhulisa kakhulu olo khuseleko.
Nanku umzekeliso ukunceda ukucacisa oku: Wena nomhlobo wakho nizama ukuhambisa itafile enzima ngaphaya kwegumbi. Phakathi kwenu nobabini, ningaya phakathi. Emva koko esinye isihlobo sabahlobo singena ngaphakathi ukukunceda, kwaye ungabahambisa bonke. Amayeza okugonya afuna idosi engaphezulu kwesinye ayisiyiyo. kunqabile. Nayi eminye imizekelo yezinye izitofu zokugonya eziyinxalenye yothotho lwee-multidose: > hepatitis A kunye hepatitis B
Ngaba zikhona ezinye izitofu CI-OVID-19 efuna idosi ezimbini?
Ezinye iintlobo zezitofu zokugonya ze-COVID-19, kubandakanya nezo zikhulayo, zifuna iidosi ezimbini. Nantsi eminye imizekelo:
amathamo amabini anikiwe
iiveki ezi-8 ukuya kwezi-12
I-Novavax: amathamo amabini alawulwa iiveki ezi-3
amathamo amabini alawulwa
Iiveki ezi-3 s
iCoronavac : amathamo amabini alawulwa inyanga 1 ngokwahlukana
Ngaba ezinye izitofu ze-COVID-19 zifuna idosi enye kuphela? Emva kokuphonononga ukhuseleko kunye nedatha esebenzayo evela kuvavanyo olukhulu lweklinikhi, i-FDA inike eli chiza Ukususwa okungxamisekileyo kokuSebenzisa eUnited States.
Kufuneka uhlale ixesha elingakanani phakathi kogonyo?ccin Pfizer-BioNTech kunye neModerna, kukho ixesha lokulinda phakathi kwedosi yokuqala neyesibini. Ixesha eliphakathi kwamayeza lixhomekeke kwisitofu osifumene.
Kutheni ufuna eli xesha lokulinda? Idosi yokuqala inceda kakhulu amajoni akho omzimba. Iyazisa kwiprotein ye-spike kwaye iyivumele ukuba ivelise impendulo encinci yamajoni omzimba ngaphambi kwethamo lesibini. Kuthatha ixesha ukuba le nkqubo ikhule ngokufanelekileyo. Kukwabalulekile ukuba ungathathi idosi yakho yesibini kwangoko, kuba oku kunokuchaphazela ukusebenza kweyeza lokugonya. Njengoko kuyalelwe
Amaziko oLawulo noKhuseleko lweZifo (CDC)
, unokufumana idosi yakho yesibini ukuya kwiintsuku ezi-4 ngaphambili kunokuba bekucetyisiwe.
Kwenzeka ntoni xa ulinda ixesha elide ukufumana isitofu sakho sesibini? Fumana idosi yakho yesibini ngokusondele kangangokoible yexesha elifunekayo. Ungazibuza ukuba kwenzeka ntoni xa ungafumani idosi yakho yesibini ngexesha elichaziweyo. I-CDC ine isikhokelo
soku nayo. Kwezi meko, ithamo lesibini linokunikwa ukuya kuthi ga kwiiveki ezi-6 (iintsuku ezingama-42) emva kwethamo lokuqala. Okwangoku asazi nokuba ukulibaziseka kwethamo lesibini ixesha elide kuneli kunefuthe l ' Ukuba kunokwenzeka, zama ukwenza idinga lokufumana idosi yesibini ngosuku lokufumana idosi yakho yokuqala. Ukuba awuyicwangcisanga idosi yakho yesibini ngeli xesha, nxibelelana nendawo apho ufumane idosi yakho yokuqala ukwenza idinga.
Leliphi inqanaba lokhuselo onalo emva kogonyo lokuqala? Masiqwalasele oku ngezantsi>
Abaphandi abasebenza kwizilingo zeklinikhi zokugonya i-Pfizer-BioNTech babone ukusebenza kogonyo lwe 52 yeepesenti
phakathi kwexesha lokuqala kunye nedosi yesibini, eyintsuku ezingama-21. Nangona kunjalo, iyeza lokugonya le-Pfizer-BioNTech linokusebenza ngakumbi emva kwethamo lokuqala kunokuba bekucingwa ngaphambili. Olu lwazi luvela kuhlalutyo olwahlukileyo olwenziwe zizazinzulu zase-UK. Bafumanise ukuba ukusebenza kweyeza lokugonya bekusondele ngokwenene kwi
89-91% kwiintsuku ezili-15 emva kwethamo lokuqala.
Ukusebenza kokugonya kwama-50.8% bekukhoifunyenwe ukuya kwiintsuku ezili-14 emva kwethamo lokuqala. Isitofu sokugonya besisebenza nge-92.1% ngaphezulu kweentsuku ezili-14 zokuqala. Ngoku makhe siqwalasele ukhuseleko emva kokufumana idosi yesibini yePfizer-BioNTech okanye iModerna vaccine. Isifundo esahlukileyo
, ngoku sikwi-preprint, sijonge kule. Olu phononongo lulandele abantu kwiintsuku ezingama-63 emva kokufumana idosi yabo yesibini.
Abaphandi baqwalasele impendulo yomlo omncinci emva kwethamo lesibini. Ngelixa amanqanaba omzimba wonke aqala ukwehla kancinci ngokuhamba kwexesha, ahlala ephakanyisiwe kwiintsuku ezingama-63. Ukugonywa kwe-Moderna kwiintsuku ezingama-90 emva kwethamo lesibini. Olu phononongo lwaluncinci, lubandakanya abathathi-nxaxheba abangama-34.
Amanqanaba aphezulu ee-antibodies aveliswa emva kwedosi yesibini. Ngokufana nesifundo sePfizer-BioNTech esixoxwe ngasentla, amanqanaba omzimba aqala ukwehla kancinci ngokuhamba kwexesha. Nangona kunjalo, amajoni omzimba aqhubekile kumanqanaba aphezulu emva kweentsuku ezingama-90.
Ithamo lesibini ngu-
Kuba zombini ezi zitofu zibonakala zisebenza iintsuku ezili-14 okanye nangaphezulu emva kwethamo lokuqala, usenokuzibuza ukuba ingaba idosi yesitofu sokugonya iyafuneka ngokwenene na.
Kuyinyani ukuba bekukho iingxoxo phakathi kwamagosa ezempilo oluntu kunye noososayensi malunga nokubakho kokulibaziseka okanye ukususa ithamo lesibini lezi zitofu zokugonya.
Inkqubo yokucinga ngasemva koku kukuba ukulibaziseka okanye ukuphelisa idosi yesibini kuya kuvumela abantu abaninzi ukuba bafumane inqanaba lam lokhuseleko. Inokukunceda ukwandisa
ukuhambisa izinto zokugonya
Nangona kunjalo, kukho ezinye iinkxalabo malunga noku. Ukuzikhusela ngokupheleleyo okanye ukusebenza kwesitofu sokuchaphazela kunokuchaphazeleka. Ukongeza, amanqanaba okuzikhusela asezantsi anokukhokelela ekuveleni okungaphezulu kwe- iintsholongwane ezahlukileyo
ezinokuthi zikushiye kwizitofu zangoku. Okwangoku, i-FDA
ukuba iqhubeke nokulandela ishedyuli yomthamo eyavavanywa kuvavanyo lweklinikhi yaza yasetyenziselwa ukusetyenziswa okungxamisekileyo.
Ungayifumana iPfizer yethamo elinye kunye neModerna yenye? I
CDC qaphela ukuba ngelixa kukho akukho kukhetha isitofu sokugonya kwesinye, ezi zitofu zimbini azitshintshi. Ngesi sizathu, kubalulekile ukuba ufumane idosi yakho yesibini yemveliso efanayo nedosi yakho yokuqala.
Esi sesinye sezizathu zokuba kutheniI-COVID-19
anikezelwa emva kokuba ufumene idosi yakho yokuqala. La makhadi anika ulwazi oluxabisekileyo
ngolwazi malunga nesigonyo osifumeneyo kwaye xa usifumana.
Ngaba kukho umahluko kwiziphumo ebezingalindelekanga phakathi kwethamo lokuqala nelesibini?
Amayeza amabini e-COVID-19 ane-
, ezinje nge: iimpendulo, ezinokubandakanya iintlungu, ukuba bomvu okanye ukudumba >>
iintlungu iintlungu zomzimba
sinesifo sokudumba iindawo
Iziphumo ebezingalindelekanga ezivakala emzimbeni wakho, ezinjengomkhuhlane, ukudinwa kunye nentloko, zixhaphakile emva kokufumana idosi yesibini
yonyango Oku kuyinyani kwizitofu zokugonya zePfizer-BioNTech kunye neModerna.
Khumbula ukuba idosi yokuqala yesitofu sokugonya ivelisa impendulo ebuthathaka qemva kwedosi yesibini. Ngesi sizathu, kunokwenzeka ukuba ube neziphumo ebezingalindelekanga emva kwethamo lesibini.
Ezi ziphumo bezingalindelekanga ziluphawu lokuba impendulo yomzimba iyenzeka emzimbeni wakho. Kodwa, kuqhelekile ukuba kungabikho ziphumo ebezingalindelekanga konke konke. Isitofu sokugonya sisaza kukhuthaza impendulo yakho yomzimba, nangaphandle kwempawu.
Ezinye izitofu ze-COVID-19, ezinjengezo ziveliswa yi-Pfizer-BioNTech kunye neModerna, zifuna iidosi ezimbini. Ezinye, njengeyeza lokugonya likaJohnson & Johnson, lifuna idosi enye kuphela. Ezinye izitofu zifuna iidosi ezimbini kuba impendulo yomzimba yokuzikhusela kwidosi yokuqala ibuthathaka. Idosi yesibini inceda ukomeleza le mpendulo yomzimba ngcono.
Xa ufumana isitofu sakho sokugonya se-COVID-19, qiniseka ukugcina irekhodi lokugonya emva koko. Oku kukuqinisekisa ukuba uyazi ukuba loluphi ugonyo osifumene kunye nexesha ekufuneka ulicwangcisile ngaloidosi yesibini.
I-American coronavirus: la ngamaqela aphambili ngoku athathwe kakhulu yi-covid-19
2021-06-24 21:49:46 | Impilo
Ukusweleka kwabantu abakwicovid-19 kuye kwehla kakhulu e-United States, kodwa -nabantu abaninzi abasagonywanga- inani lokufa kwemihla ngemihla likumakhulu. Kwaye amaqela asemngciphekweni kakhulu ngabantu abancinci nabancinci kunye nabantu abamnyama baseMelika. ...